Dagaal ba'an oo weli ka socda magaalada Marawi ee Philippines - BBC News Somali
Dagaal ba'an oo weli ka socda magaalada Marawi ee Philippines
Image caption Diyaarad nooca basaasidda ah oo Maraykanku leeyahay oo dul heehaabaysa Marawi
Ciidamada Philippines ayaa sheegay in ay jirto caddayn xooggan oo muujinaysa in laba nin oo walaalo ah oo hogaaminayey mitidiintii qabsaday laba todobaad iyo dheeraad ka hor magaalada Marawi ay dhinteen.
Dagaal culus ayaa weli ka socda magaalada, waxaana Jimcihii lagu dilay saddex iyo toban ka mid ah ciidamada badda.
Wadarta mitidiinta ilaa haatan la dilay ayaa gaadhay 138, ciidanka dawladdana waxa ilaa haatan ka dhintay 58 askari iyo labaatan qof oo rayid ah sidaana waxa lagu sheegay warbixin ay dawladdu soo saartay.
Dagaalka loogu jiro dib u qabashada magaalada Marawi ayaa noqday mid ba'an, iyadoo dagaal lagu le'day uu ka socdo dhisme kasta oo ku yaal badhtamaha magaalada.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid garanaysa tirada maleeshiyaadka jihaad alsooska ah ee halkaa lagu dilay kuwaas oo maydkoodu hoos yaallo burburka guryaha dumay ee ku yaal magaalada keliya ee ay muslimiintu dalkaasi ka deggan yihiin.
Dagaalyahannada ayaad moodda in ay adeegsanayaan dhufeyso iyo kannaalo ay qoteen iyo hub culus oo ay hastaan.
Hasayeeshee waxaa jira warar sheegaya in dadka dhintay ay ka mid yihiin walaalaha Maute kuwaas oo qorsheeyay horkacayayna weerarka; xog laga helay xidhiidh ay lahaayeen koox kale oo dhexda laga qabtay ayaana sidaa muujisay.
Waxaa la qabtay waalidiinta labadaa nin kuwaas oo la rumaysanyahay in ay dhaqaale ku caawinayeen kooxdaa hubaysan.
Waxa la xaqiijiyay in Mareykanku uu dagaalkan dhanka farsamada ka caawinayay ciidammada qalabka sida ee Philippines. Haddii ay taasi jirtana waxa ay noqonaysaa in isbadel uu ku yimid Madaxweyne Rodrigo Duterte, kaas oo sanadkii hore si cadho leh gaashaanka ugu daruuray faragelinta Mareykanka uu ku hayay dalkiisa, isagoo markaa dalbaday in la hakiyo xidhiidhka milateri ee dhaw ee ay leeyihiin labada dal.